Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRoma
Ikhaya ligcwele uhlaza kunye nokukhanya. Ukuba ujonge indawo yokuhlala enoxolo le yindawo yakho. Indawo yokungena ingasemva kweyadi enemithi yemango kunye nokuhonjiswa kweteracota. Ndiqinisekile ukuba uya kuyithanda.
Sinendawo yokuhlala enoxolo, enomoya kunye nekhanyayo. Simalunga ne-1/2 km ukusuka kwisikhululo sebhasi yejubilee, malunga neekhilomitha ezi-3 ukusuka kwisikhululo saseSecundetabad kwaye malunga ne-2.5 kms ukusuka kwimarike enkulu yaseRanigunj. Ngaphandle kokuba kufutshane kuzo zonke ezi ndawo sikwenye ye ezona ndawo zinoxolo. Ukuhamba ngoxolo kude nesiphithiphithi esiqhelekileyo kwaye sibekwe ngokufanelekileyo.
Ukuba ufuna ukufumana uxolo kunye nentuthuzelo, le yindawo efanelekileyo kuwe
Umbuki zindwendwe ngu- Roma
Sisoloko sifumaneka efowunini.Iindwendwe zingatshintshiselana ngolwazi nge what's app.